ईरानमा फेरि अर्को रहस्यमय घटनाः एकैपटक ७ वटा जहाजमा आगलागी ! | Ratopati
ईरानमा फेरि अर्को रहस्यमय घटनाः एकैपटक ७ वटा जहाजमा आगलागी !
personएजेन्सी exploreइरान access_timeअसार ३१, २०७७ chat_bubble_outline0
एजेन्सी । ईरानमा बुधबार एकैपटक ७ वटा जहाजमा आगलागी भएको छ । ईरानका सरकारी सञ्चारमाध्यामहरुका अनुसार दक्षिणी ईरानको बुशहर बन्दगाहमा रहेका ७ वटा जहाजमा एकैपटक आगलागी भएको हो ।
स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन संगठन प्रमुखकाअनुसार आगो नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ । तर क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन । एकैपटक ७ वटा जहाजमा कसरी आगलागी भयो भन्ने रहस्य खुलेको छैन । तर यसले ईरानमा पछिल्ला हप्ताहरुमा रहस्यमय घटनाहरु बढाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसअघि रहस्यमय ढंगले ईरानका क्षेप्यास्त्र केन्द्र, पावर प्लान्ट, मेडिकल क्लििनिकहरु र आणविक केन्द्रमा पनि श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोट र आगलागीका घटना भएका थिए । लगातारका यी घटनाले इरानमा केही आशंकाहरु जन्माएको छ । सोमबार उत्तरपूर्वी शहर माशद नजिकै रहेको एक औधोगिक केन्द्रमा आगलागी भएको थियो ।
ईरानी अधिकारीहरुका अनुसार आगालागीका कारण ६ वटा ग्यास ट्याङकर पड्किएका थिए । उक्त घटना भएको एकदिन अघिमात्र दक्षिण पश्चिम मशहर शहरको पेट्रो रासयनिक केन्द्रमा आगलागी भएको थियो । तर उक्त आगलागीलाई तेल चुहावटका कारण भएको भनिएको थियो । यता, शनिबार राजधानी तेहरानको दमकल विभागको एक भवनमा रहेका थुप्रै ग्यास सिलिण्डरहरु पड्किए । त्यसको कारण पनि रहस्यमै रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै जुलाई २ मा नतान्जको युरोनियम सम्बद्र्धन केन्द्र र २६ जुनमा खोजिर मिसाइल उत्पादन केन्द्रमा बम विष्फोट भएको थियो । ती घटनाहरुका बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको ईरानी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले त्यसमा चाहे विदेशी सेना वा घरेलु विपक्षी समूह, जसको संलग्नता भएपनि कार्वाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसअघि सन् २०१० मा संयुक्तराज्य अमेरिका र इजरायललाई उनीहरुले निर्माण गरेको कम्युप्टर भाइरसका कारण नातान्जको मेशिनरीमा हमला गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।श्रोतः बीबीसी